Dhageyso: Sheekh Cali Dheere oo Ka Hadlay Weerarkii Galbeedka Beled Weyne iyo Fariin Muhiim ahna u diray Shacabka Jabuuti.
Tuesday October 25, 2016 - 06:44:39 in Wararka by Super Admin
Hoggaanka Xarakada Al Shabaab ayaa war kasoo saaray weerarkii xooganaa ee ciidamada Jabuuti lagula beegsaday magaalada Beled Weyne xarunta gobolka Hiiraan.
Sheekh Cali Maxamuud Raage (Sheekh Cali Dheere) ayaa shir Jaraa’id oo uu qabtay uga hadlay weerarkii Beled Weyne iyo xaaladda guud ee Dalka Soomaaliya.
Ugu Horrayn Afhayeenka Xarakada Al Shabaab ayaa sheegay in weerar Askar badan oo Jabuutiyaan ah lagu dilay ay ku qaadeen saldhig melleteri oo dhaca galbeedka magaalada Beled Weyne.
Wuxuu sheegay in qaraxa lala helay saldhigga Ciidanka Jabuuti uu u dhacay sidii loo qorsheeyay islamarkaana tobaneeyo askari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerarka.
Sheekh Cali Dheere ayaa Shacabka Jabuuti ugu baaqay in wiilashooda ay gacmaha qabtaan oo ay joojiyaan hallaagga aysan dani ugu jirin ee Soomaaliya kasoo wajahaya.
Wuxuu ku dheeraaday ka hadalka xummaanta Maleeshiyaadka Jabuuti ee Soomaaliya ku sugan kuwaas oo cadawga Itoobiya uga hiiliyay shacabka Soomaaliyeed ee Muslimiinta.
Xarakada Al Shabaab ayaa ciidanka Jabuuti ku eedaysay in dhaqan xumo iyo fasaad dhan walba ay ku dhax faafinayaan shacabka Hiiraan waana arrin ay uga duwanyihiin ciidamada kale ee Soomaaliya kusoo duulay.
Dhinaca kale Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa shacabka Hiiraan ku dhaqan ugu baaqday in ay sare uqaadaan is barbar taaggan halganka Jihaadiga ah ee dalka ka socda si ay uga baxaan dulliga iyo xasuuqa ay kala kulmayaan ciidamada shisheeye ee guryahooda kusoo duulay.
Sheekh Cali dheere ayaa umadda Soomaaliyeed ee jecel in shareecada Islaamka laysku maamulo ugu hamblyeeyay dib ufurashada magaalooyin iyo deegaano uu horay u qabsaday cadawga.
Ugu dambeyn Xarakada Al Shabaab ayaa wacad ku martay in ciidamada Jabuuti iyo shisheeyaha kale ee dalka kusoo duulay ay kusii wadi doonto dagaalka inta ay isaga baxayaan dhulalka muslimiinta oo ay xoogga ku qabsadeen sanado ka hor.
Halkan ka dhageyso Kalimadda Sheekh Cali dheere MP3